ONLYOFFICE waxay ku daraysaa taageerada dukumintiga dhammaadka-dhamaadka dukumiintiyada | Laga soo bilaabo Linux
Iyadoo la sii deynayo nooca ugu dambeeya ee Tifaftirayaasha Desktop-ka ONLYOFFICE, soosaarayaasha xafiiskan waxay ku dhawaaqeen aragtida koowaad ee muuqaalka dukumintiga dhammaadka-dhamaadka dhammaadka-dhamaadka (min dhamaadka ilaa dhamaadka), waxaa fuliya xannibaadda.
ONLYOFFICE Tifaftirayaasha Desktop waa qolal xafiis loo qaybiyey shuruudaha rukhsadda AGPL v3 in la abuuro, la arko oo wax laga beddelo dukumiintiyada qoraalka, buugaagta shaqada iyo bandhigyada qad la'aanta, intaad kuxirantahay ONLYOFFICE Online, Nextcloud ama ownCloud si aad uhesho sifooyinka iskaashiga (wada-shaqeynta waqtiga dhabta ah, faallooyinka iyo sheekaysiga isku dhafan).
ONLYOFFICE Tifatirayaasha Muuqaal waxay bixisaa tabe user interface ah, oo u oggolaanaysa adeegsadaha inuu ka shaqeeyo faylal badan oo ku yaal daaqad keliya.
1 Sirta dhamaadka-ilaa-dhamaadka ayaa timid
1.1 Wada-daabicista dukumintiyada sirta ah
1.2 Sidee loo tijaabiyaa muuqaalka cusub?
Sirta dhamaadka-ilaa-dhamaadka ayaa timid
Laga bilaabo nooca ONLYOFFICE ee 5.2.4, dadka isticmaala waxay tijaabin karaan sirta dhamaadka-ilaa-dhamaadka awood u siinta habka u dhigma iyo abuurista koontada shabakadda gaarka loo leeyahay ee ONLYOFFICE si loo keydiyo loona wareejiyo furaha sirta ah si gaar ah iyadoo lagu saleynayo Parity, macmiilka ugu horumarsan Ethereum.
Muuqaalkan cusub wuxuu ilaaliyaa dukumiintiyada (docx, xlsx, pptx, odt, iyo ods), oo ay ku jiraan faylal ku meel gaar ah, oo leh algorithm encryption AES-256.
Tikniyoolajiyada 'Blockchain technology' oo leh asturnaan asymmetric ah waxay hubineysaa kaydinta iyo wareejinta sirta lagu kalsoonaan karo
Dukumiinti kasta waxaa lagu kaydiyaa furahiisa 256-bit AES, waa la cusbooneysiiyaa mar kasta oo dukumiintiga la keydiyo.
Marka la eego, fure kasta waxaa lagu ilaalinayaa sirta asymmetric (adoo adeegsanaya furahaaga guud) ka dibna lagu kaydiyo shabakadda xannibaadda leh UUID gaar ah oo ah magaca faylka iyo cinwaanka koontada xannibaadda qoraaga.
Marka la xareeyo, dukumiintiyada la xareeyay ayaa lagu kaydiyaa madal daruur la doorbido
Si dib loogu bilaabo ka shaqeynta dukumintiga oo leh ONLYOFFICE, eray sir ah waa in aan la galin. Iyada oo la awood siinayo dhamaadka-ilaa-dhamaadka sirta, dukumiintiga ayaa si otomaatig ah loo dejinayaa iyadoo la isticmaalayo furahaaga gaarka ah.
Wada-daabicista dukumintiyada sirta ah
Intaa waxaa sii dheer, adeegsadayaashu way wadaagi karaan dukumiintiyo sir ah si loo wadaago, waqtiga-isla-daabacaadda.
Dhammaan dukumiintiyada iyo qoraalada wada-qorayaasha ayaa lagu kaydiyaa dhinaca macmiilka. Sidaa darteed, xogta waxaa loo wareejiyaa server-ka qaab foom ah oo loo diro isla markaana waqtiga saxda ah lagu qoro qaataha haddii ay leeyihiin xuquuqda marin u helida dukumiintiga.
Si aad u bilowdo wada-daabacaadda dukumiintiyada sirta ah, Dhammaan wada-qorayaasha waa inay ku xirnaadaan daruuraha iyagoo adeegsanaya barnaamijyadooda kumbuyuutarka oo leh karti u leh dhammaadka illaa dhammaadka. No password waa in loo badalaa wadaagista iyo wada shaqeynta.
Sidee loo tijaabiyaa muuqaalka cusub?
Si aad u bilowdo, koontada xannibaadda 0 waa in lagu abuuraa shabakadda gaarka loo leeyahay ee ONLYOFFICE iyadoo la taageerayo caddeynta mashiinka la isku raacsan yahay ee maamulka.
Waxay tan ku sameeyaan iyagoo furaya dejimaha tifaftiraha PC-ga isla markaana karti u siinaya in loo diro qarsoodi ilaa dhammaad, tabka u dhigma ayaa ka soo muuqan doona midigta.
Tag tabka "Dhammaadka-ilaa-dhamaadka sirta".
Halkan waxaad ka abuureysaa koontada shabakadda 'ONLYOFFICE blockchain network' adigoo gujinaya badhanka u dhigma oo galaya eray sir ah.
Shabakadu waxay fulisaa BIP39 si loo soo saaro weedha mnemonic oo si otomaatig ah loogu keydiyo feylka DOCX ee mashiinkaaga maxaliga ah ee lagu ilaaliyo lambarka sirta ah ee aad gasho. Isku-darka ereygan 12-ka ah waa habka keliya ee lagu furi karo koontadaada Blockchain.
Waa in la ogaadaa in nooca hadda jira waxaa lagu heli karaa oo keliya tijaabada.
Si aad u furto koontadaada marka xigta isla mashiinka, si fudud u qor lambarka sirta ah ee loo adeegsaday sameynta.
Si gaar ah uga shaqeyso qalab kale ama haddii ay dhacdo inaad lumiso marinka koontadaada, waxaad si fudud dib ugu heli kartaa adoo adeegsanaya weedha.
Lammaane furaha guud iyo kuwa gaarka ah ayaa la soo saari doonaa oo lagu heli doonaa macluumaadka koontadaada. ONLYOFFICE waxay hirgelisaa BIP39 si loo soo saaro.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » ONLYOFFICE waxay ku daraysaa taageerada dukumiintiga dhammaadka-dhamaadka dukumintiga